September 18, 2021 - Celegroup
September 18, 2021 Celegroup1975 0
မိန်းခလေးတစ်ဦးကို ပစ္စည်းလဲယူ၊ လည်လှီးပြီးသတ်သွားတဲ့သူကို လူအုပ်ကြီးကမကျေနပ်လို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်(ရုပ်သံ) ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွား ထိုင်းရဲတွေက စက်ရုံအလုပ်သမားမိန်းကလေးတစ်ဦးကို ပစ္စည်းလဲယူ၊ လူကိုလဲလည်လှီးသတ်သွားတဲ့ အသက် ၅၀ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ ထိုင်းအမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းခေါ်လာစဉ်မှာ အခဲမကြေဖြစ်တဲ့ လူအုပ်စုကြီးက လူသတ်သမားကို ထိုးကြိတ်ဖို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားတဲ့ ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက ထိုင်းနိုင်ငံ ရယောင်းခရိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအုပ်စုကြီးကို ထိုင်းရဲတွေက အချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့လို့ တရားခံကဘာမှမဖြစ်သွားခဲ့ပါဘူး။ ဝင်တားတဲ့နေရာမှာ ရဲအင်းအား ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ credit zawgyi […]
“သူများထက် ရှေ့ရောက်ချင်ရင် ဒါတွေ မလုပ်မိပါစေနဲ့”
နေ့တိုင်း အလုပ်ကြိုးစားနေတာ နှစ်တွေလည်း ကြာလှပြီ။ ရည်မှန်းချက်တွေလည်း ရှိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အခြေအနေက တခြားသူတွေနဲ့ ထူးမခြားနား ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ့်တက်လမ်းကို ထိခိုက်အောင် လုပ်နေမိတဲ့ အမှားလေးတွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) အပြောအဆို မလိမ္မာခြင်း နှုတ်ရေးရဲ့ အလုပ်ကို လျှော့မတွက်သင့်ပါဘူး။ လူက တော်ပါရဲ့သားနဲ့ ။ အပြောအဆိုမတတ်ရင် အထက်ရောက်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာ အချင်းချင်းနားလည်အောင် ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာအပြင် တစ်ဖက်လူနဲ့ ကိုယ့်အကြားမှာ ယုံကြည်မှုနဲ့ […]
ကိုယ့်အတိုင်းအဆနဲ့ကိုယ် ပုံမှန်ကြိုးစားနေပါ အချိန်တန်ရင် ပန်းတိုင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်
အိုဘားမားက အသက်၅၅နှစ်မှာ အနားယူတယ်၊ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ်က အသက်၇၀မှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။ဘန်ကောက်က စင်ကာပူထက် တစ်နာရီပိုစောတယ်၊ဒါပေမယ့် ဘန်ကောက်တစ်နေ့တာနဲ့ စင်ကာပူတစ်နေ့တာဟာ ကြာချိန်ချင်းတော့ အတူတူပါပဲဘန်ကောက်က ပိုမမြန်သလို စင်ကာပူက ပိုမနှေးပါဘူး တချို့က အသက်၂၂နှစ်မှာ ဘွဲ့ရကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘဝအာမခံချက်ရှိတဲ့ အလုပ်မျိုးရဖို့ ၅နှစ်လောက် အချိန်ယူနေရတယ်၊တချို့က အသက်၂၅နှစ်လောက်နဲ့ CEOဖြစ်လတယ်၊ အသက်၅၀လောက်ကျတော့ အနိစ္စရောက်ရော၊တချို့ကျတော့ အသက်၅၀ကျမှ CEOနေရာရောက်တယ်၊ ပြီးတော့အသက်၉၀ လောက် ထိ နေသွားရတယ်၊တကယ်တော့ ကမ္ဘာပေါ်က လူတစ်ဦးချင်းစီဟာ […]
သူများတွေကို လုံး၀ ထုတ်ဖော်မပြောသင့်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ(၅)ခု…
ပွင့်လင်းတဲ့ သူတိုင်းက ခင်မင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ပွင့်လင်းပါစေ ကိုယ့်ဆီမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ သိထားသင့်တဲ့ အရာတွေဆိုတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်နော်။ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေကို လွယ်လွယ်ပြောမိတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူအတွက် အသုံးချသွားနိုင်တဲ့ ပျော့ကွက်တွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူများတွေကို ထုတ်မပြောသင့်တဲ့ အရာတွေက ဒါတွေပါနော်။ ကိုယ့်ရဲ့ အစီအစဉ်တွေ ကိုယ်ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာတွေလုပ်မယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ plan က ဘယ်လိုရှိတယ် စသဖြင့် ဒါတွေကို တစ်ခြားသူတွေဆီမှာ […]
လူတစ္ေယာက္ေသလွ်င္ လက္မႏွစ္ခုႏွင့္ ေျခမႏွစ္ခုကိုႀကိဳးခ်ည္ထားတတ္သည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိခဲ့ပါ။ ထုံးစံအရလုပ္သည္ဟုသာ နားလည္ထား၏။ ဟိုတုန္းက ဆရာေတာ္တစ္ပါးေဟာၾကားေသာ တရားကိုနာရင္း ဤအေၾကာင္းကို သိခြင့္ရခဲ့သည္။ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ နားေထာင္ရင္းသေဘာက်မိသည္။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အက်ိဳးရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ တစ္ခါတုန္းက လယ္ပိုင္ရွင္သူေဌးတစ္ေယာက္ဆီမွာ အခစားလုပ္သည့္ သူရင္းငွားတစ္ေယက္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းမရွိ၍ စိတ္ပ်က္ေနေလ၏။ တစ္ေန႔၌ စဥ္းစားမိ၏။ လယ္ပိုင္ရွင္ထံ လယ္ေတာင္းမည္။ ကိုယ္ပိုင္ လယ္လုပ္ခြင့္ရလွ်င္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပႏိုင္သည္။ “သူေဌး … သူေဌးမွာ […]
unicde ကလေးတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိဘတွေ သတိထားရမယ့် ကိစ္စတွေက အများပြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၃ နှစ် ၊ ၄ နှစ် အရွယ် ကလေးတွေကို မတော်တဆ အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် စောင့်ကြည့်ရတာ တကယ်ကို မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီလို အရွယ်ကလေးတွေဟာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဆော့တတ်လွန်းတော့ တစ်ယောက်ထည်း လွတ်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေး ဟာ တစ်ယောက်ထဲ တကုတ်ကုတ် […]
အသက်ငယ်တုန်း လက်မထပ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း (၆)ချက်
အသက်ငယ်တုန်းလက်မထပ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း(၆)ချက် အသက်ငယ်တုန်းလက်မထပ်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း(၆)ချက်ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာမမေ့သာငယ်ကပေါင်းအနှစ်တစ်သောင်းမမေ့ကောင်းဆိုတဲ့ဆိုရိုးကိုကြားဖူးကြမှာပါ မြန်မာဓလေ့မှာငယ်လင်ငယ်မယားဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလည်း ရှိပါတယ်မြန်မာ့အယူအဆမှာ အသက်ငယ်တုန်းလက်ထပ်တာဟာလည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ် ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်မှာအသက်ငယ်တုန်းလက်ထပ်လည်းမကောင်းတော့ပါဘူးအများစုသတ်မှတ်ထားတဲ့ အရွယ်ဟာ၂၆နှစ်ကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်ထပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ် 1.အဆင်သင့်မဖြစ်သေးအသက်၂၀လောက်မှာ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။မိဘကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူများကကိစ္စမရှိပါဘူးကမန်းကတန်းယူလိုက်ရတဲ့လင်မယားများကတော့အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်ငွေကြေးလည်း အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသလို နေထိုင်စရာအတွက်လည်းစိတ်မချရသေးပါဘူး။ 2.စိတ်ဖိစီးမှုများနိုင်လခထုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့အိမ်လခရေမီတာစားစရိတ်သုံးစရိတ်သာရေးနာရေးစတာတွေကိုအမြီးနှုတ်ခေါင်းနှုတ်နဲ့လုံလောက်တဲ့စုဆောင်းငွေကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာငွေလိုခဲ့ရင်လည်းခေါင်းပေါ်ကိုအထုပ်ကြီးကြီးပိလာနိုင်ပါတယ်။ 3.ဘဝအခြေမခိုင်။ငယ်တုန်းမှာတက်လမ်းများများရှာထားပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးအိမ်ထောင်ရေးကကြားဖြတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ သင့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ကလည်း နှောင့်နှေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 4.ဒေါသဖြစ်လွယ်အရမ်းချစ်လို့ယူထားကြပေမယ့်အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့အခါသင့်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် အပြစ်ပုံချချင်စိတ် ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဖွင့်မပြောဖြစ်ရင်တောင်မှ သင်ဟာအိမ်ထောင်သည်ဘဝကိုသိပ်မနှစ်သက်တော့ပါဘူး 5. သားရေးသမီးရေးကလေးမရှိတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေကစိတ်မပူရပါဘူးအိမ်ရဲ့ရတနာလေးတွေဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ထိန်းဖို့အချိန်မပေးနိုင်တာထိန်းမယ့်သူရှိရင် တောင်ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ပိုမိုကြိုးစားရှာဖွေရတာတွေ ဖြစ်လာပါပြီ 6အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်သင်ကခြေကပ်လက်ကပ်ထားချင်ပေမယ့်စုစရာရယ်လို့ပိုလျှံငွေမရှိတဲ့အခါမှာ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်ရှေ့ကရှာလိုက် နောက်က ကုန်လိုက် ဖြစ်နေတာကြောင့်သင့်ဆီမှာအဖတ်တင်တာသိပ်မရှိနိုင်ပါဘူးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာအိမ်ထောင်ပြုဖြစ်တာထက်သင့်ဘဝအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့လမ်းကြောင်း တစ်ခုပေါ်ရောက်ပြီးစိတ်မပူရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလက်ထပ် တာဟာသင့်အတွက်ရောသင့်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Credit အသက္ငယ္တုန္းလက္မထပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္း(၆)ခ်က္ […]
ဘလိုင်းကြီးဘဏ်အကောင့်အပိတ်ခံလိုက်ရပီး Customer တွေအပေါ် သစ္စာဖောက်တဲ့ KBZဘဏ် လို့ဆိုလာတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး
ဘလိုငျးကွီးဘဏျအကောင့ျအပိတျခံလိုကျရပီး Customer တှအေပေါျ သစ်စာဖောကျတဲ့ KBZဘဏျ လို့ဆိုလာတဲ့ ပွညျသူတဈဦး ကြှနျတော့ျရဲ့ ဘဏျအကောင့ျတှေ အပိတျခံလိုကျရပွီ freeze အလုပျခံလိုကျရပါပွီ စစအပိတျခံရခွငျးတုနျးက ကြှနျတောျမသိခဲ့ဘူး၉ရကျ ၉လ ၂၀၂၁ မနကျပိုငျးလောကျ အထိ ငှဝေငျ ငှထှေကျ ရှိနသေေးတယျ ၉ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးလောကျမှာ မိတျဆှတှေကေ ကြှနျတော့ျဆီ ငှလှေှဲလို့ မရတော့ဘူး transfer incomplete ဖွဈနတေယျ တဈခကြျစဈကွည့ျပေးပါဦးဆိုပွီး လှမျးပွောကွတယျ။ ကြှနျတောျလညျး တခွား […]
သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့(သို့မဟုတ်) သေကံမပါသေးသော ည
Zawgyi ေသေန႔မေစ့ေသးေသာေန႔(သို႔မဟုတ္) ေသကံမပါေသးေသာ … ည စာဖတ္သူတို႔အတြက္ ေစတနာနဲ႔ တင္ေပးလိုက္ပီေနာ္ ေသေန႔မေစ့ေသးေသာေန႔(သို႔မဟုတ္)ေသကံမပါေသးေသာ ည… အိမ္ကိုညေနေျခာက္နာရီခြဲေလာက္မွ ျပန္ေရာက္ေတာ့ အမ်ိဳးသားက ညစာစားဖို႔ဟင္းေႏႊး ဘာညာ သူျပင္လိုက္မယ္ဆိုပီး ေအာက္ထပ္မွာ ျပင္ဆင္ေနခဲ့တယ္။က်မတို႔အိမ္က အေပၚထပ္နဲ႔ ေအာက္ထပ္ အေတာ္ေလးေအာ္ေျပာမွ ၾကားႏိုင္တာပါ….သမီးေလးနဲ႔ က်မ အိမ္အေပၚတက္လာခဲ့ပီး က်မလုပ္စရာေလးရွိလို႔သမီးေလးကို တီဗီ ဖြင့္ေပးပီး…. လုပ္စရာရွိတာေလးလုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သမီးေလးကေတာ့ အိပ္ရာေပၚမွာ ေဆာ့ရင္းကစားရင္း သူစိတ္ဝင္စားတဲ့သီခ်င္းေလးေတြလာရင္ တီဗီေငးရင္းေပါ့…. သမီးေလးက အိပ္ရင္ […]
မိဘတွေဟာသားသမီးတွေ အပေါ်သူတို့တတ်တဲ့ ပညာသူတို့သိတဲ့ အသိတွေ သူတို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကိုသားသမီးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့ကြတယ်။ လိုက်နာသူရှိသလို မလိုက်နာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် ကိုယ့်မိဘတွေက ကုန်ရောင်း ကုန်ဝယ်အလုပ်သာလုပ်တတ်တော့ဒီအလုပ်ပဲ အမွေပေးခဲ့တယ်လေ။ ငယ်ငယ်က စျေးဆိုင်သွားရမှာစိတ်အညစ်ဆုံး မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အဖေက လွဲပြီးတစ်အိမ်လုံး အိပ်ရာထ ရတယ်။ တခါမှ ကျောင်းပိတ်လည်း နံနက် ၇ နာရီအထိမအိပ်ခဲ့ရဘူး အမေက ပျင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာ စိုးတယ်။မိသားစု အကုန်သူနေရာနဲ့သူအလုပ် လုပ်စေတယ် အလုပ် လုပ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့တခြား အလုပ်ပေးမလုပ်ဘူး မိဘ […]
တဈခါက လယျသမားတဈဦးဟာ ညစဉျညတိုငျး ဖားအောျသံတှကွေောင့ျ အိပျရေးပကြျလို့နပေါတယျ။ တဈနေ့တခွားပိုပွီးဆိုးရှားလာတာကွောင့ျ လယျသမားကွီးဟာ အခုလိုပဲအကွံဉာဏျထုတျလိုကျပါတယျ။ ဒီဖားတှကွေောင့ျ ငါအိပျရေးပကြျရပေါငျးမြားပီ။ ဒီဖားတှကေိုဖမျးပွီး လမျးထိပျက စားသောကျဆိုငျကိုသှားရောငျးမယျဆိုရငျတော့ အိပျရေးဝဝလညျးအိပျလို့ရမယျ။ အပိုဝငျငှလေညျး ရနိငျတယျဆိုပွီး ဆုံးဖွတျခကြျခကြာ လမျးထိပျမှာရှိတဲ့ စားသောကျဆိုငျကိုထှကျသှားခဲ့ပါတယျ။ စားသောကျဆိုငျကိုရောကျပွီး ဆိုငျပိုငျရှငျကိုတှေ့တဲ့အခါမှာတော့ မိတျဆှတေို့ဆိုငျမှာ အမွညျးဟငျးလြာကောငျးကောငျးရောငျးခနြိငျဖို့အတှကျ ကြှနျတောျဖားတှကေို ဖမျးပေးနိငျပါတယျ။ အလိုရှိရငျ ကြှနျတော့ျကိုပွောပါ လို့ပွောလိုကျတဲ့အခါ ဆိုငျရှငျဖွဈသူက ဖားဘယျလောကျမြားမြားရှိလို့လဲ။ နေ့စဉျပုံမှနျဖမျးပေးနိငျပါ့မလား လို့ပွနျမေးလိုကျတဲ့အခါ သိပျရှိတာပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတော့ျအိမျခေါငျးရငျးက လယျကှငျးထဲမှာ […]
ဘဝအတွက် ချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်းပဲ သိထားလို့မဖြစ်ဘူး သင့်ကို ဆင်းရဲသွားစေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကိုလည်း သိထားရမယ်
ဘဝအတှကျ ခမြျးသာမယ့ျ နညျးလမျးပဲ သိထားလို့မဖွဈဘူး သင့ျကို ဆငျးရဲသှားစနေိုငျတဲ့ အခကြျတှကေိုလညျး သိထားရမယျ ခမြျးသာမယ့ျ နညျးလမျးဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆငျးရဲမယ့ျ နညျးလမျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ခမြျးသာမယ့ျ နညျးလမျးကို မသိသေးသူတှကေ ဆငျးရဲစမေယ့ျ နညျးလမျးတှကေို ရအောငျ ရှောငျရှားလိုကျတာနဲ့ ခမြျးသာမယ့ျ နညျးလမျးကို တဈဖကျကနေ ပွနျလညျကငြ့ျသုံးရာ ရောကျစမှောပါနောျ။ အခုဖောျပွပေးမှာကတော့ သင့ျကို အမွနျဆုံး ဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အမူအကငြ့ျ (၅) မြိုး ဖွဈပါတယျ။ ရှောငျရှားကွဖို့လိုပါတယျ […]